तबमात्र तपाईंले अस्तित्वको अनन्ततालाई जान्न सक्नुहुनेछ - Action Khabar - Nepali Online News Portal
काठमाडौं । कुनै व्यक्तिलाई आफ्ना मान्यता र विश्वासहरूको घेराले बनेको आफ्नो मानसिकताबाट बाहिर निस्किन तथा आफ्नो जीवनको आधारभूत पक्षबारे नै पूरै अनभिज्ञ रहेको कुरा स्वीकार गर्नको निम्ति विशाल हिम्मत चाहिन्छ । के तपाईं आफूसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ ? वा, तपाईंलाई आफूसँग दुईवटा हातहरू छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यदि तपाईंले आफ्नो आँखाले हेर्नुभएन भने पनि तपाईंसँग दुईवटा हातहरू छन् भनेर जान्नुहुन्छ । यो कुरा तपाईंले अनुभवबाट जान्नुभएको छ । तर, जब भगवानको कुरा आउँछ, तपाईंलाई विश्वास गर्न भनिएको छ । कसैले पनि तपाईंलाई देवत्वको खोज गर्न भन्दैनन् !
तपाईं आफ्नो मनमा चाहे जेसुकै सोच्नुहोस्, त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । साधनको रूपमा मन उपयुक्त छ, तर अस्तित्वको वास्तविकता जान्नको लागि यसले सहायता गर्दैन, किनभने आज मन एउटा रूपमा हुन्छ, अनि भोलि अर्कै । मनलाई जस्तोसुकै आकार वा स्वरूप दिन सकिन्छ । यसले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने कुरा यसलाई कसरी प्रभावित गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।
यदि तपाईंले गहिराइमा हेर्नुभयो भने, तपाईंले जे लाई “मेरो मन” भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले वरिपरीका हजारौँ मानिसहरूबाट बटुल्नुभएको हो । तपाईंले अनेकौँ छिद्रहरू जम्मा गरी यो मन बनाउनु भएको छ । तपाईंको मन तपाईंकै पृष्ठभूमि मात्र हो, जुन तपाईं कस्तो परिवारबाट आउनुभयो, तपाईंले के–कस्ता शिक्षाहरू लिनुभयो, कुन धर्म–सम्प्रदायमा हुर्किनुभयो, तपाईं जुन समाज, राष्ट्र वा यहाँ सम्म कि जुन विश्वमा रहनुभएको छ, त्यसले निर्धारित गरेको छ ।
- २ मंसिर २०७८, बिहीबार १०:१७ मा प्रकाशित